Unyaka weZiko loNyaka weeMviwo eziPhezulu
Kutheni unyaka wesihlanu wesikolo esiphakamileyo ungakulungela
Ngaba uyazi ukuba bonke abaphumelele esikolweni esiphakeme baye ngqo kwiikholeji? Kunoko, abanye abafundi bakhetha ukuthatha unyaka wegap. Kukho uninzi lweminyaka yokukhetha i-gap, kuquka ukuhamba, ukuzithandela, ukusebenza, ukuhlala ngaphakathi nokuphandle ukuthanda ubugcisa. Kodwa akukho konke. Abanye abafundi basebenzise iminyaka yabo yegap ukuqhubela phambili izifundo zabo zemfundo ekulungiseleleni iikholeji. Kunene, omnye unyaka wesikolo. Nangona kukho iiprogram ezininzi zeminyaka yezemfundo ezifumanekayo kubafundi, omnye wabo ubandakanya ukubhalisa kwisikolo sabucala njengomfundi osemva kwesigqibo, mhlawumbi eyaziwa njengePG. Enyanisweni, unokumangaliswa xa ufumanisa ukuba abafundi abangaphezu kwe-1,400 ababhalisa kwiiprogram ze-PG ezikolweni zokubhukuda ngonyaka.
Izikolo ezininzi ezizimeleyo zinika le program ye-gap yonyaka-ogqitywa emva kwesigqibo okanye unyaka we-PG-leyo ikharityhulam yexesha elide eyenzelwe abafundi abaye baphumelela esikolweni esiphakeme kwaye babamba idiploma yesikolo esiphakeme. Ngokwesiko, iiprogram ze-PG zijoliswe kubafundi besilisa, nangona kunjalo, inani labafundi bebhinqa ababhalisa njengezithuba zokugqibela emva kokuphumelela. Izizathu zabafundi besini okanye isini ukuya esikolweni sabucala namhlanje zihlala zifana. Nangona aba bafundi sele befumene idiploma yesikolo esiphakeme, kukho izizathu ezininzi zokuba abaninzi banokukhetha ukubhalisa kwizikolo ezizimeleyo, ngokukodwa kwizikolo zebhodi, ngaphambi kokuya ekholejini, eziquka:
Ukuphucula izakhono ezinxulumene nokufunda, umbutho kunye nokulawula ixesha
Ukuphucula ubuchule bokufunda
Ukuphucula ubugcisa beelwimi
Ukuphucula amathuba okuba athathe indawo yokudlala imidlalo ekolishi
Ukuphucula iphothifoliyo yobugcisa kwiikholeji okanye esikolweni esikhethekileyo sobugcisa
Ukuphucula amathuba okufumana iikholeji eliphezulu
Ukulungiselela ubomi kude nekhaya okokuqala
Yiyiphi enye into ofuna ukuyifumana malunga neeprogram ze-PG esikolweni sabucala? Makhe sicinge kwizinto ezisiseko zeprogram kwaye kutheni inkqubo ye-PG inokulungele.
Abafundi abadinga ukukhuthazwa kwezemfundo ukuze bafike kwiikholeji zabo ezikhethiweyo banokuzuza kwi-PG ngonyaka kwesinye sezikolo ezizimeleyo ezizimeleyo kweli lizwe. Oku kubandakanya abafundi abangazange bamkelwe kwiikholeji zabo ezikhethiweyo, abafundi abafuna ukudibanisa ezinye iikhredithi kwiincwadi zabo, kunye nakwezinye iingcali eziqinileyo zabafundi abafuna ukufumana iikholeji ezikhuphisanayo.
Ezinye izikolo zinekharityhulam ekhethekileyo yezifundo zabafundi be-PG, ngelixa abanye bevumela abafundi be-PG inkululeko yokukhetha nokukhetha kuzo zonke iinkonzo zabo. Oku kuthetha ukuba kwezinye izikolo ezizimeleyo, abafundi be-PG banokuvunyelwa ukuthatha iiklasi ezithile okanye bagxininise kwisihloko esithile sophando ukuze babe ngumqhubi okhuphisanayo nakwiikholeji. Izifundo ngamanye amaxesha ziyinxalenye yeprogram ye-PG, evumela abafundi ithuba lokuba bafumane amava ngamazwe okwenene ngaphambi kokuba baye ekholeji baze bakhethe i-key.
Ngaba awunakufumana ikholeji enika yona? Ngaba ufuna omnye unyaka ukuphucula izakhono, amandla kunye nobuchule bakho? Unyaka we-PG unokufanelekile. Awuyi kusebenza kuphela kunye nabaqeqeshi bezikolo eziphakamileyo eziphezulu apho kwaye uqeqeshe kwiindawo zobugcisa, kodwa uya kuba nokubonakala ngakumbi. Izikolo ezininzi eziphezulu zokubhankqalaza zineenkcukacha ezinamandla kunye nabaqeqeshi beekholeji nabaqashi, kwaye ukungaziwayo kwezi nkqubo zodwa kunokukunceda ukuba uqaphele zizikolo ezingenakuze zive nakwe. Ukuthabatha ithuba lokuqeqesha omnye unyaka unokuba yiloo nto ekufuneka uyenze umsebenzi wakho wezemidlalo kwizinga elilandelayo.
Unyaka we-PG unokunceda kwakhona kubandakanya abafundi ukufunda ulwimi olutsha. Ezinye zezona zikolo ezihamba phambili zebhodi zase-US zinikeza iinkqubo zezifundo zabafundi beeNgesi, okanye abafundi be-ELL / ESL, abafuna ukuphucula ukulawula kwabo ulwimi lwesiNgesi ukuze bafunde kwiiyunivesithi zaseMelika. Ngokufanayo, abafundi baseMerika bafuna ukufundisisa kwelinye ilizwe kwiikholeji banokuzuza kwiiprogram ze-PG kwizikolo zamazwe ngamazwe ukwenzela ukuqhubela phambili ukuqonda kwabo ngolunye ulwimi. Kuyavunywa, iiprogram ze-PG zifumaneka rhoqo eUnited States, kodwa zikho izikolo ezizizwe ngezizwe ezinikezelayo.
Lungiselela Ubomi kwiKholeji
Uninzi lwabafundi be-PG ezikolweni zokubhukuda zifumanisa ukuba ukuchitha iminyaka ukususela ekhaya kukubanceda ukuba batshintshe ngokubhekiselele ebomini kwikholejini ngokufumana amava okuqala. Indawo yokuhamba esikolweni ifana nomboniso wokuphila kwikholeji, kodwa kunye nesakhiwo kunye nesikhokelo. Oku kunceda abafundi bakwazi ukulungelelanisa ubomi, ukuphucula izakhono zabo zomsebenzi kunye nokulawula ixesha, nokubanceda bahlakulele ukulinganisela kwesikolo, imisebenzi, ezemidlalo kunye nobomi bentlalo.
Ukuchitha unyaka wegap kwisikolo sabucala kwiprogram ye-PG kunokunceda abafundi bakwazi ukuzilungiselela kangcono kwiikholeji, kwaye kubandakanya abafundi abafuna ukudlala imidlalo ekolishi. Abo banomdla kwiCandelo le-NCAA Iiprogram zekholeji kwi-scholarships yezemidlalo zinokuzuza kakhulu kumnyaka we-PG. Lo nyaka owongezelelweyo wokufunda kunye nokudlala kunokunceda abadlali bezemidlalo baphuculle amabakala abo ukuze bakwazi ukufumana iimali-mali, kunye nokuzinika ixesha lokuba banamandla, banokukhawuleza, kwaye banamakhono amaninzi. Izikolo ezizimeleyo zinika abacebisi beekholeji kunye nabaqeqeshi abaphezulu abaya kukunceda ukuba uqaphele ngabaqashi beekholeji. Kuqhelekile ukuba izikolo ezizimeleyo zihambele iimbonakalo kunye neenkampu apho abaqeqeshi beekholeji banokubambelela ngetalente yakho.
Abanye abafundi banokuzuza kwiinkqubo zobugcisa ngexesha lootitshala bokugqibela esikolweni kwizikolo ezizimeleyo. Ngezikolo ezininzi ezibonelela ngeenkqubo zobugcisa ezinamandla, kubandakanya ubugcisa obubonakalayo, ubugcisa bedijithali, umculo, umdlalo / umdlalo wezemidlalo kunye nomdaniso wokudanisa, abafundi banakho ukukwazi ukwenza umsebenzi wabo wobugcisa. Ezinye izikolo zinikeza uncedo ekuphuhliseni iphothifoliyo yekholeji yokhuphiswano kunye nokubonelela ngamathuba abafundi ukuba babonise umsebenzi wabo kwiimifanekiso zobugcisa kwi-campus nasekuhlaleni.
Ukuba ukuya kwiprogram ye-postgraduate kuyandiva ngathi kuya kulungele wena, khangela ezo zikolo ezinikezela ngeenkqubo ze-PG. Unokufumana kwakhona uluhlu olupheleleyo lwezikolo zokubhola e-US nakwamanye amazwe anika iinkqubo zePG apha.
IAvon Old Farms School
Amabanga 9-12 kunye nePG
Isikolo soThatana ngesini: Bonke abafana
IAvon Old Farms ibhalisa abafundi be-15-20 kwi-PG ngonyaka, kwaye aba bafundi babonwa njengamalungu eklasi eliphezulu. I-Academic Dean isebenza ukwenza iishedyuli nganye kwi-PG ukuze kuphuculwe ngcono iphrofayili yakhe yezemfundo. Ukwamkelwa kwiprogram ye-PG kulinganiselwe, kwaye ngenxa yezinga eliphezulu lokukhuphisana, abafundi abamkelweyo banokulindela okuphezulu.
Kulindeleke ukuba bathathe inxaxheba kwimisebenzi yobunkokeli eklasini, kwimimandla yezemidlalo kunye nakwiindlala. Basebenza ngokubambisana neofisi yokuCetyiswa kweKholeji kulo nyaka; abanye banokuqalisa umsebenzi wabo neofisi ehlobo ngaphambi kokuqala kwesikolo. Kaninzi "
Kukho eMntla eBridgton, eMaine
I-Bridgton Academy isikolo esikhethekileyo esinomsebenzi wokubonelela inkqubo eyenzelwe abafundi base-postgraduate, balungiselela amadoda amancinci kwiinkqubo zeekholeji nakumaxesha angaphezulu. Isikolo sinika inkqubo ephakamileyo yezifundo, kubandakanywa neNkqubo yokuHlalwa kweKholeji (CAP) kunye neKholeji yokuCetyiswa, kunye neNkqubo yoBuntu kunye ne-STEM. Kaninzi "
Efumaneka eKeshire, Connecticut
Amabanga 9-12 & PG
Abafundi be-PG kwi-Cheshire Academy ukusuka kubadlali abanetalente abafuna omnye umnyaka wokubhenca kubaculi nabafundi abafuna ixesha elide lokuphucula imiqulu yabo. I-Academy ikholelwa ukuba izifundo zabafundi be-PG kufuneka zibe ngumsebenzi onenjongo nophambili oqhubela phambili iphrofayili yesikolo somfundi. Ikhosi iyahlangabezana neemfuno zeCandelo leeNkqubo zezemidlalo kunye nokungena esikolweni. Iquka i-PG semina, leyo yinkqubo ekhethekileyo yokufundwa efunekayo kubo bonke abafundi be-PG, kubandakanywa i-SAT prep, uncedo lweekholeji yesicelo, ukuthetha koluntu, i-finance, economics, nokunye. Iprogram ye-Art Major kwi-Academy ilungele abafundi bokudala abafuna ukuya kwezinye zezikolo zobugcisa eziphezulu kwilizwe. Kaninzi "
Deerfield Academy. ImageMuseum / SmugMug
UDeerfield uyamkela malunga nabafundi abayi-25 abagqwesileyo emva konyaka. Abo bafundi baqwalaselwa njengenxalenye yeklasi eliphezulu (malunga nabafundi abangama-195), kwaye bafanelekile ukuba bathathe inxaxheba kuzo zonke iinkqubo zesikolo. Ii-PG zibhekwa njengenxalenye ebalulekileyo yendawo yaseDeerfield, njengoko isikolo sivuma ukuba sinokomeleza umoya wesifundo, sinikela ngenkokheli enamandla kwaye kaninzi sikhonza njengabacebisi kwabanye abafundi beDeerfield. Kaninzi "
I-Fork Union Military Academy
Efumaneka kwiFork Union, eVirginia
Amabanga 7-12 kunye nePG
I-Fork Union Military Academy iye yafumana idumela likazwelonke kwimidlalo yezemidlalo, ngonyaka ukuthumela abagijimi abangama-60 ukusuka kwisikolo sabo esiphakamileyo kunye namaqela angaphantsi kwe-NCAA kwiCandelo leeKholeji kwiinkqubo zeekholeji zezemidlalo. Ziyinye yezikolo eziphambili kweli lizwe ngokufuna abadlali, ngokukodwa ibhola lebhola. La maqela akhuphisana ngokwahlukileyo nakwii-underclassmen kwaye zivelise abadlali be-athlete ngokuqhubekayo okuphumelelayo, kufaka phakathi i-NFL yesibini ekhethiweyo. Awuphelelanga kwimpumelelo yebhola yebhola kunye nebhokisi. I-Fork Union Military Academy iphinda ivelise abadlali abaphezulu ekulandeleni, ukubhukuda nokudilika, i-lacrosse, ukulwa, igalofu kunye nebhola. Kaninzi "
Ikhona kwi-Interlochen, eMichigan
Unyaka wokugqibela kwi-Interlochen ijoliswe kubafundi abajolise ekugxileni ekulungiseni okukhulu kwezobugcisa ngaphambi kokungena kwiikholeji, kwinqanaba leyunivesithi okanye kwisikolo sobugcisa.
Abafundi be-PG bafuneka ukuba babhalise ubuncinane kwiklasi eyodwa yemfundo nganye yeemester, ngelixa ezinye ikhefu zazo zikhethiweyo zingaba ziiklasi ezihambelana nezikhundla zabo. Basenokuthatha iikhosi kwezinye iikholeji okanye ezinye iiklasi zezemfundo ukwenzela ukuphucula izikolo zabo eziphezulu zezikolo. Xa kugqitywe inkqubo yonyaka, abafundi baya kufumana isatifikethi sokuya kwi-Arts Academy. Kaninzi "
Northfield iNtaba iHermon
Efumaneka kwiNtaba yaseHermon, eMassachusetts
Iprogram ye-NMH ye-PG icwangciswe ngcamango kwaye ixhaswa ngumcebisi ozinikezele kunye nomphathi wezemfundo weklasi owanceda abafundi bahlangabezane neenjongo zabo. Uqeqesho lweekholeji kubafundi be-PG luqala ngosuku lokuqala lokufika kwabo kwi-campus, kunye neentlanganiso phakathi kwabacebisi neentsapho. Kaninzi "
Phillips Andover Academy. Daderot / Wikimedia Commons
Abafundi be-PG e-Andover ngabafundi abagqwesileyo ekukhangekeleni unyaka owongezelelweyo, unyaka owedlule ngaphambi kokuya kwiikholejini okanye kwiyunivesithi. Abafakizicelo abafanelekileyo baya kubandakanywa ngokugcwele, bahlonipha abafundi bezinga lokuthatha izifundo ezicelomngeni. Kukho ukugxininisa okugqithiseleyo ukubeka ukukhula kwezemfundo kunye nomgangatho wokufunda ngokufanelekileyo ngexesha elide. Ikomidi lokumkela lijonga ngokucophelela oku kukhula kwaye linomdla kuphela kubafundi abafundiswayo kwaye bafuna unyaka onzima. Kaninzi "
Bakala 6-12 & PG
I-PGs kwi-WMA ziyinxalenye yeendawo ezahlukahlukeneyo zeekholeji zekholeji apho umfundi ngamnye unokufuna ingqwalasela yedwa kwi-faculty ezinikeleyo. Baya kuthatha inxaxheba kwiiprogram ze-Athletics kunye neMisebenzi yokuqhubela phambili ukuphuhliswa nokwenza iitalente nezakhono abafundi abangakwazi ukuzenza kuzo kwiikholeji zabo. Iofisi yokuCetyiswa kweKholeji isebenza kunye nabafundi be-PG ukunceda ukhethe nokufaka izicelo kwiikholeji nakwiiyunivesithi ezifanelekileyo ngokuvumelana neetalente zomfundi ngamnye, iimfuno kunye neenjongo. Kaninzi "
Ukubuyela kwiSitolo seSikole: Yintoni ongayifumana kwisikolo seBhodi
Indlela yokudala iSicwangciso soThengiso kwiSikolo sakho
Ukutya kwesikolo: iMenu ekhethekileyo kwiZikolo zeBhodi
Imbali ye-Jamaican Rocksteady Music
Iphepha, iPlastiki, okanye into engcono?
I-Master The Fabulous Down Down e-Cheerleading
IDelaware State University Admissions
Ukuvukela kwamaNdiya ka-1857: Ukuvinjelwa kweLucknow
Inkcazo kunye neMimiselo yoTshintsho olusisiseko kwiNgesi
UGeorges Louis Leclerc, u-Comte de Buffon